China eqingqiweyo ilitye lenyengane ilitye ngaphandle mveliso kunye nabenzi | Imisebenzi ka-Atisan
Ezinkulu zangaphandle Stainless Iibhola Balloon Dog Scul ...
Zangaphandle oqingqiweyo intsimbi eyahlulayo igadi yobhedu ...
100% isandla oqingqiweyo zonqulo oqingqiweyo ubungakanani ubomi natu ...
Ubungakanani: ubungakanani ngentando
Ukupakisha Ibhokisi Yomthi Ngaphakathi: I-Foam ethambileyo
Imifanekiso eqingqiweyo yelitye leMarble ngaphandle komthombo omkhulu wamanzi
Imarble yelitye eqingqiweyo lesikwere sokuhombisa ngaphandle umthombo omkhulu wamanzi
Marble, Ilitye, Granite, Travertine, Sandstone okanye njengoko requirment yakho
Ukutshona kwelanga ngemabula ebomvu, i-marble ye-hunanwhite, i-granite eluhlaza kunye nokunye okunjalo
Njengoko iimfuno zabathengi
Imifanekiso eqingqiweyo encinci kwiintsuku ezingama-30 ngesiqhelo. Imifanekiso eqingqiweyo emikhulu iza kuthatha ixesha elininzi.
Ingenziwa ngemfuneko ngokokuyila kwakho.
Uhlobo lomfanekiso oqingqiweyo
Indawo yomlilo, iGazebo, umfanekiso oqingqiweyo wezilwanyana, umfanekiso oqingqiweyo wenkolo kaBuddha, ilitye eliqingqiweyo, iBust Bust, iNqanaba leNgonyama, ubume bendlovu kunye namatye aqingqiweyo ezilwanyana. Stone Fountain Ball, Stone Flower Pot, Lantern Series Umfanekiso, Stone Sink, eqingqiweyo Table noSihlalo, Stone nangokukrola, Marble nangokukrola njl
Umhombiso, ngaphandle nangaphandle, igadi, isikwere, ubugcisa, ipaki
Sinemithombo eyahlukeneyo yomthombo onokukhetha kuwo, nceda unxibelelane nathi ukuba uyafuna. umthombo wamanzi wemabhile egadini okanye eyadini. Okokuqala, umthombo ungabonisa umgangatho wobomi. Okwesibini, umthombo unokongeza amandla kunye negadi yethu. Isitshizi ngasinye samanzi amancinci sinokuyinyakamisa imeko-bume kwaye sihlambulule umoya.
Singumatshini wemarmore okroliweyo kwaye sinokuyamkela imithombo yamanzi ethengiswayo neyesiko. Sineentlobo ezininzi zemithombo esinokukhetha kuyo, njenge Imithombo yemifanekiso emabhile, imithombo yezilwanyana emarmore, imithombo equkuqelayo nemithombo eseludongeni. Ungaqhagamshelana nathi ukuba unazo naziphi na iimfuno zoku.
Inkqubela phambili yemveliso
Kuthatha ixesha elingakanani ukuhambisa iimpahla zam?
Kwimifanekiso eqingqiweyo encinci kucetyiswa ukuba ukhethe ukuhanjiswa okuvakalayo, ihlala ithatha iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-7. Kwimifanekiso eqingqiweyo ephakathi okanye enkulu, zihlala zithunyelwa elwandle. Ihlala ithatha iintsuku ezingama-30.
2.Can ndiyazazi iinkcukacha zodolo lwam kwinkqubo yokuvelisa nangaliphi na ixesha?
Siza kuqala ukuyenza emva kokuba uqinisekisile imathiriyeli kunye noyilo.Kwinyathelo ngalinye lokuvelisa, ukupakisha, kunye nokuthuthwa kwamalungu, siya kukuthumela ulwazi oluneenkcukacha
3.Uyifaka njani umfanekiso oqingqiweyo?
A: Yonke imifanekiso iya kuthunyelwa kunye nemiyalelo eneenkcukacha yokufakwa.Singathumela iqela labasebenzi phesheya ukuba lifakelwe.
4. Ungaqala njani ukusebenzisana?
A: Siza kuqinisekisa uyilo, ubungakanani kunye nezinto okokuqala, emva koko senze isigqibo ngexabiso, kwaye senze isivumelwano, emva koko sihlawule idipozithi. Siza kuqala ukukrola imveliso.
Egqithileyo Umhombiso wangaphandle ubhedu lwamanzi omthombo wamatye oqingqiweyo uyathengiswa
Okulandelayo: Igadi yangaphandle yendalo yegadi yamaRoma yemarble marble gazebo
Imifanekiso eqingqiweyo yoMthombo wamanzi eBronzi
Umthombo weBronze waseGadini
Ixabiso uKhuphiswano yangaphandle amanzi umthombo ...
Umgangatho Good amanzi ilitye mihla fountai yangaphandle ...
Kwizinga eliphezulu marble scupture ingxangxasi yangaphandle ...
Abafazi abahle abadanisa umthombo othengiswayo
YaseYurophu isimbo sobhedu samanzi entlanzi kunye nomfana ...
Umthombo omkhulu weglasi ongaphandle wokuhombisa ...